Published: Thursday, 13 July 2017 09:30
Da bi, yɛkɔɔ Sankofa Akwantuo no so.
Yɛkɔɔ wiemhyɛn agyinabea na nnipa bebree wɔ hɔ. Ɛno akyi, yɛkɔɔ ba abi a yɛfrɛ no Osda fie, baabi a yɛbɛ soɛ. Ɛno akyi, yɛkɔɔ baabi a yɛnom kube na yɛtɔɔ ntadeɛ fitaa.
Ɛno akyi, yɛkɔɔ Tayiba.
Da a ɛto so mmienu no, yɛkɔɔ Oguaa. Ɛberɛ a yɛduruu hɔ no, yɛkɔɔ baabi a yɛfrɛ no Abibiman Baako na ɛhɔ na na yɛbɛsoɛ.
Da a ɛdi akyi no, yɛkɔɔ baabi a abibifoɔ na yɛto hyɛɛ wɔn so na yɛde wɔn kɔɔ aburokyire na gye sɛ wɔyɛ adwuma ama wɔn. Ɛno kyɛɛ kakra. Yɛsan kɔɔ Abibiman Baako.
Da a ɛdi akyi no, yɛsi kwan mu sɛ yɛrekɔ Kumase. Obiara daeɛ. Yɛkɔɔ baabi a yɛbɛsoɛ, ɛhɔ na na yɛkɔɔ Noda Danpɔn. Yɛfaa yɛn nneɛma to adan no mu, ɛno akyi yɛkɔɔ ɔhene fie. Yɛkyɛɛ wɔ hɔ.
Ɛno akyi, yɛkɔɔ Noda sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi didi na yɛada.
Da a ɛdi akyi no, yɛsi kwan mu sɛ yɛresan kɔ Nkran. Yɛsan kɔ Osda fie.
Na ɛbɛn da a yɛrekɔ no. Da a ɔɔmo rekɔ no, yɛkɔɔ Legon Turo. (Ɛbɛn Tayiba.)
Yɛkɔɔ nsuo so na yɛtenaa dua kɛseɛ ase. Ɛno akyi, yɛkɔɔ Tayiba akɔ didi.
Anadwo no, yɛkɔɔ wiemhyɛn agyinabea. Na mempɛ sɛ wɔkɔ, nanso gye sɛ ɔɔmo kɔ.
Published: Saturday, 10 June 2017 15:22
Atadeɛ kɔkɔɔ no yɛ fɛ.
Ɔbarima turumu no baa ha nnora.
Edua kɛseɛ na ɛsi dan no nkyɛn.
Yɛkɔ abadinto a, yɛfira ntoma fitaa.
Nnipa papa di nokorɛ.
Ɔbaa tenten no redidi.
Ɔde kotodwe gu fam.
Ɔsanteni no kɔɔ ayie.
Nnɔbaeɛ no nyinaa yɛ okuani no dea.
Ɛna ne Agyanom, mema wo akye o.
Kwasi nkɔ afuom Memeneda biara.
Akosua rennoa aduane seesei.
Kra pa nte sɛ ɔkra; ɔkyiri fi.
Yɛwoo me Wukuada.
They have not eaten today.
The children are going home.
Mmɔfra no rekɔ fie.
Madi mfeɛ nkron.
Published: Wednesday, 12 October 2016 13:16
Tikwankoraa mu Mogyatuo Ho Banbɔ (TMHB)
Sɛ obi tiri bɔ ɛboɔ a, mogya tumi tu no pii. Sɛ ɛba saa a, gyina n’atikɔ na fa wo nsateaa nyinaa mia ne kɔn ntini no so. Yei bɛme mogya no ano atwa anaasɛ mogya no ano bɛbrɛ ase.
Sɛ etire ho soa a, fa wo nsa mia so dendeenden. Ɛno akyi no, fa ɛsa bɔ nsunwunu mu na fa to so. Ɛbɛma mogya a ɛtu gu tikwankoraa wedeɛ ase no atwa.
Ɛse Bɔbea (ƐB)
Ɛse baako biara wɔ nkyekyɛmu mmiɛnsa. Ɔfa a ɛdi kan no wɔfrɛ no AHENKYƐ. Ahenkyɛ yɛ ɛse fa bi a ɛyɛ fitaa na ɛwɔ ɛse nam no soro. Ɛfiri hɔ de kɔsi ɛse ase no nso na wɔfrɛ no NHINI.
Yei na ɛtim ɛse nam mu ma ɛtumi gyina hɔ pintinn. Ɛse wɔ hɔ no, tokuro ketewa bi da mu firi aseɛ de kɔ soro. Saa tokuro yi mu na mogya ne ehon ntini fa ba ɛse mu.
Nsono Ketewa (NK)
Nsono ketewa yɛ honam teaa bi a ne tenten yɛ anammɔn nson ne fa. Nsono ketewa yi toa afuro so. Sɛdeɛ ɛware nti, abobɔ agu faako, ɛnna nsono kɛseɛ atwa ho ahyia te sɛ kahyire.
Sɛ wopae nsono ketewa mu a, wobɛhunu sɛ honam apɔapɔ nkentenkete bi sisi mu te sɛ nwi anaasɛ ago ntoma. Yeinom na ɛtwetwe aduane a onipa di nyinaa de kɔbɔ mogya mu.
Bɔnwoma Kotokuo (BK)
Bɔnwoma kotokuo yɛ adidie ne ɔnom akwaa ketewa bi a ɛtare berɛboɔ ase. Ne bɔbea te sɛ paya anaasɛ bɛntoa. Ɛtoa yɛ kurukuruwa, ano nso yɛ feafea.
Ɛha na bɔnwoma a berɛboa atwetwe afiri mogya mu bɛgu. Dwuma baako a bɔnwoma kotokuo die ne sɛ, ɛsɔne bɔnwoma so anaasɛ ɛtwetwe emu nsuo ma ɛyɛ pikaa. Bɔnwoma na ɛboa sradeɛ a onipa die no ma ɛnane yɛ mogya.
Da bi, na okuani rekɔ Kemet. Ɔgyaa aburo ma ne yere ne ne mma. Ɔduru hɔ no, obi a yɛfrɛ no Nemtynakt faa ne nneɛma nyinaa. Enti ɔkɔɔ ɔhene hɔ, nanso ɔhene ammua no. Ne nyinaa akyi, Ɔhene boaa no. Ɔde Nemtynakt baeɛ, na okuani no faa ne nneɛma. Wei nyinaa na yɛtwerɔeɛ wɔ Kemet dan mu.
Published: Tuesday, 19 July 2016 18:39
Ɛberɛ a mekɔnoaa aduane wɔ Aburi
Da bi, me ne m’abusuafoɔ de me kɔɔ Aburi. Na mekɔnoaa aduane. Yɛduruu hɔ no, mehuu nkwadaa a menhu da. Meyɛɛ brodo a mfifideɛ ne paya a yɛayam wɔ mu. Mekyerɛɛ wɔn sɛdeɛ yɛsi yɛ aduane. Ɛno akyi, m’adamfo, Kaya baeɛ. Memaa ɔno ne n’agya aduane. Na me nua boaa me wɔ aduaneyɔ mu. M’ani gyee ho.